Quudiyaha eeyaha: wax walba waan kuu sheegaynaa | Eeyaha Adduunka
Eeyaha quudiya: wax walba waan kuu sheegaynaa
Nat Cerezo | 05/10/2021 09:56 | Qalabka eyga
Eeyaha quudiya waxay leeyihiin jajab aad uga badan inta isha lagu hayo. Ka dib oo dhan, waa mid ka mid ah walxaha aasaasiga ah ee eygaagu isticmaali doono ugu yaraan laba ama saddex jeer maalintii, sidaa darteed aad bay muhiim u tahay in la doorto mid isaga ku habboon oo si fudud u adeegsada.
Taasi waa sababta aan maqaalkan ugu diyaarinnay quudiyaha ugu fiican eeyaha oo aad ka heli karto Amazon., marka lagu daro inaan kuu sheego sida loo doorto midka ku habboon eeygaaga ama adiga ama qalabka ama noocyada ugu fiican, waxyaabo kale oo badan. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale ku talineynaa maqaalkan la xiriira in ogaada kuwa ugu badan ee quudiya eeyga.
Eeyaha Quudiya ...
Aasaaska Amazon - Quudiyaha ...
Edipets, Quudiyaha Eyga ...
Quudiyaha Pecute ee ...
1 Quudiyaha ugu fiican eeyaha
1.1 Quudiyaha ka hortagga ceeryaanta oo leh labis
1.2 Samee laba quudiye aluminium
1.3 Quudiyaha leh labyrinth
1.4 Quudiyaha leh derin
1.5 Quudiyaha otomaatiga ah ee bisadaha iyo eeyaha
1.6 Weelka dhoobada eeyaha
1.7 Quudiye aan siibasho lahayn
2 Noocyada baaquli eeyda
2.4 Ka hortagga uumiga
2.5 Toos ah
3 Khilaafka quudiyaha ee la kiciyay
4 Sida loo doorto baaquli
5 Meesha laga gato quudiyaha eeyga
Quudiyaha ugu fiican eeyaha
Quudiyaha ka hortagga ceeryaanta oo leh labis
Hound Funund Feeder ...
Haddii eeygaagu aad ugu walwalsan yahay cuntada, waad danaynaysaa baaquli ka-hortagga buuxinta oo ka fogaanaya wax kasta oo halis u ah torsion caloosha (gadaal baan ka hadli doonnaa). Qaabkani wuxuu ka samaysan yahay caag iyo, marka lagu daro dhowr midab, waa mid aad u xiiso badan maxaa yeelay kaliya maahan inay kuu oggolaato inaad doorato karti, laakiin sidoo kale moodooyin kala duwan.
Iyada oo loo marayo qaabkan fudud, quudiyaha ayaa hubiya in xayawaanku uusan si xamaasad leh wax u cunin (Waxay qaadan doontaa ilaa toban jeer in cuntada la cuno). Fikradaha ayaa isku raacay inay u muuqato inay shaqeyneyso, gaar ahaan eyda waaweyn ee taranka leh, inkastoo qaarkood ay ka cawdaan inay adag tahay in gacanta lagu nadiifiyo.
Samee laba quudiye aluminium
Aasaaska Amazon ayaa bixiya setkan xiisaha leh oo ah laba fijaan oo aluminium ah. Ma aha oo kaliya inay yihiin kuwo aad u xoog badan, sidaa darteedna ku habboon eeyaha guurguura ee ugu badan, laakiin waxay kaloo ku jiraan saldhig caag ah si aan si fudud loogu dhaqaajin karin. Waxaa intaa dheer, waxaad ku ridi kartaa makiinada weelka waxna ma daxalayn doonto. Waxa kaliya ee xun ayaa ah inaadan awoodin inaad doorato karti, mid walba wuxuu hayn karaa ilaa 900 garaam oo cunto ah.
Quudiyaha leh labyrinth
Quudiyaha Eyga Decyam ...
Quudiyahaan kale oo leh Naqshadeynta maze waxay u oggolaan doontaa eygaaga inuu si dhakhso ah wax u cuno iyada oo ay ugu wacan tahay qaab -dhismeedkeeda, kaas oo gudaha ay ku yaalliin waddooyin taxane ah oo lagu xadeeyay meela caag ah. Midkani sidoo kale wuxuu leeyahay midabyo qurux badan iyo naqshado kala duwan (marka eygaagu naqshadda wadnaha ku barto, hubaal waa inaad ku dartaa mid kale) taas, marka lagu daro, waxay kuxirantahay xajmiga eyga.
Soo -saaraha wuxuu kula taliyaa inay aad muhiim u tahay, haddii eeygu waxyeello u geysto, inaad isla markiiba beddeshomaadaama laga yaabo inaad halis ugu jirto neef -qabatin.
Quudiyaha leh derin
Quudiyahaani waa mid aad iyo aad u xiiso badan, oo ah ikhtiyaar aad u wanaagsan in la tixgeliyo haddii aad rabto inaad yeelato dabaq nadiif ahMaaddaama ay ku jirto derin, waxaad doorbideysaa baaquli bir ah, maadaama ay tahay maaddada laga sameeyay, iyo haddii aad rabto inay lahaato awood ay ku yareyso eygaaga marka uu wax cunayo, maadaama uu leeyahay naqshad ka hortagga uumiga. Intaa waxaa dheer, waxaad dooran kartaa awoodda, oo lagu heli karo laba cabbir, M iyo L.
Quudiyaha otomaatiga ah ee bisadaha iyo eeyaha
KITTY 7L PUPPY Quudiyaha ...
Waa kan doorasho qaali ah Dhammaan kuwa aan maanta ka hadli doonno, laakiin waxaa aad loogu talinayaa kuwa waqti yar ku qaata guriga ama doonaya inay xakameeyaan miisaanka cuntadooda, tusaale ahaan. Qaybiyahaan waxaa loo adeegsan karaa eeyaha iyo bisadaha labadaba, wuxuu diyaarin karaa hal ilaa afar jeer maalintii wuxuuna leeyahay hawlo kale oo aad u qabow, tusaale ahaan, waxaad duubi kartaa codkaaga si aad ugu wacdo xayawaankaaga si uu wax u cuno. Waxay leedahay awood dhan toddoba litir.
Weelka dhoobada eeyaha
Saxanka dhoobada ee TRIXIE ...
Ma doonayno inaan illowno weelasha dhoobada ah ee loogu talagalay eeyaha, kuwaas oo moodelkan laga soo qaatay sumadda Jarmalka ee Trixie aad loogu taliyay. Waxay aad ugu habboon yihiin eyda xasaasiyadda leh waxaana lagu daaweeyaa dahaad dhalaalaya oo gebi ahaanba ammaan ah oo sidoo kale ka dhigaysa mid aad u fudud in la nadiifiyo. Qaabkani wuxuu leeyahay saddex awoodood oo kala duwan (0,3, 0,8 iyo 1,4 litir) iyo naqshado iyo midabyo dhowr ah oo laga dooran karo.
Quudiye aan siibasho lahayn
Oo waxaan ku dhammaynnaa quudiyaha labanlaab ah oo dhab ah oo leh sariir, kaamil ah si xayawaankeennu uusan nooga tegin dhulka dawacooyinka ka samaysan. Weelasha waxay ka samaysan yihiin bir birta ka samaysan, waxay ku habboon yihiin roogga oo aad bay u sahlan tahay in la nadiifiyo. Waxaad ku ridi kartaa cunto qalalan, qoyan, biyo, caano ... Quudiye kasta wuxuu leeyahay qiyaastii 200 ml.
Noocyada baaquli eeyda
Waxaa jira noocyo badan oo badan oo kala duwan ee quudiyaha eey, iyo mid kasta waxaa lagu hagaajin karaa nooc eey oo kale ah. Marka xigta waxaan kaala hadli doonnaa maahan oo kaliya noocyada kala duwan, laakiin sida ay u shaqeyn karaan, ama maahan, waxay kuxirantahay nooca eyda ay ku wajahan yihiin.
Weelasha caagga ah ayaa shaki la'aan ah kuwa ugu caansan eeyaha eyda, laga yaabee inay ugu mahadcelinayaan qiimahooda (aan laga adkaan karin) iyo cimri dhererkooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhibaatooyin, maadaama eeyaha jecel qaniinyada iyo xoqidda ay dhaawici karaan baaquli. Bakteeriyadu waxay ku kori kartaa xagashada, ugu dambayntii waxay baaquli ka dhigaysaa mid aan nadiif ahayn oo aan ammaan u ahayn xayawaankaaga.
Intaa waxaa dheer, isagoo aad u fudud, weelka caagga ah ayaa sidoo kale dhib ku ah eeyaha aadka u dhaqdhaqaaqamaadaama ay garaaci karaan oo cuntada ka dhigi karaan mid dhacda.
Weelasha dhoobada ah, si hufan, ayaa ah ikhtiyaar wanaagsan oo eeyaha dhaqaaqay badan (In kasta oo aan la dhaafin badda, maadaama haddii eeygaagu yahay dabayl duufaan ah wuu jebin karaa) sababta oo ah way ka miisaan badan yihiin waxayna ku kacaysaa kharash yar in la dhaqaajiyo. Iibso iyaga oo leh dhoobada lagu daaweeyo lakabka dahaarka leh, maadaama sida oo kale ay tahay maado aad u dalool badan oo ay sidoo kale degaanada bakteeriyadu degi karaan. Sidaa darteed, haddii baaquli jabo, waa inaad isla markiiba tuurto.
Muuqaal kale oo xiiso leh oo dhoobada ah ayaa ah inaysan u keenin falcelinta eeyaha. kuwaas oo la il -daran nooc kasta oo xasaasiyad ah alaab kale.
Quudiyayaasha biraha waa kuwo wax ku ool ah waana ikhtiyaarka ay jecel yihiin dad badan, maaddaama ay yihiin kuwo aad u adkaysi u leh, oo ku habboon kuwa ugu dhaqaaqa badan, eeyaha culus, iyo, marka lagu daro, inta badan waxaa ku jira lugaha caagga ah si aysan si fudud ugu socon karin. Intaa waxaa dheer, maaddada ay ku samaysan yihiin awgeed, aad bay u fudud yihiin in la nadiifiyo oo jeermis la dilo.
Si kastaba ha ahaatee, aad bay u buuq badan yihiin marka eeydu wax cunaan ama aan dul saarno cunto, sidaa darteed haddii aadan jeclayn sanqadha dheer tani waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu fiican.
Ka hortagga uumiga
Haddii eeygaagu yahay mid aad u dhuuban oo leh Badanaa caloosha ayaa ka xanuunsata cunista degdegta ah, baaquli aan buuq lahayn ayaa xalka noqon kara. Weelashaani maahan oo kaliya inay eey caadaystaan ​​inay si tartiib tartiib ah wax u cunaan, laakiin sidoo kale waxay ka dhigaan inuu ka fikiro, maadaama ay ka kooban yihiin nooc labyrinth ah oo eygu ka heli doono cuntadiisa.
Bixiyeyaasha cuntada eey ee otomaatiga ah ayaa shaki la'aan ugu habboon kuwa leh waqti yar oo ay kula qaataan eeyaha, maadaama ay mas'uul ka tahay buuxinta baaquli cuntada si toos ah. Waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad mar labaad ku buuxiso cunto cusub. Badankoodu waxay kuu oggolaanayaan inaad doorato inta jeer iyo inta jeer ee maalintii la hawlgelin doono.
Khilaafka quudiyaha ee la kiciyay
Xaqiiqdii, Waxaa ka mid ah noocyada quudiyayaal aan hadda ka hadalnay, waxaad seegtay mid kale: quudiyayaal la kiciyey. Sababta aannaan ugu darin waa mid fudud, waxay halis u yihiin eydaas oo ku dhici kara torsion -ka caloosha.
Gubashada caloosha waa cudur daran oo ay tahay in sida ugu dhaqsaha badan loo daaweeyo. Waxaa sabab u ah eyga laftiisa marka uu wax ku cuno damac badan, kaas oo ku shubta raashin iyo gaas badan, taas oo keenta in caloosha soo gelitaankeeda iyo ka bixiddeeduba xirmaan, taasoo keenta dibiro iyo naxdin, taasoo keeni karta dhimasho.
In kasta oo bilawgii maddiibadaha la kiciyey lagula taliyay eyda u nugul cilladaan sababta oo ah waxay u maleeyeen inay cuneen hawo yar markii ay wax cunayeen, daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujisay in xaqiiqda, ay ka soo horjeeddo, iyo in adeegsiga quudinta noocan ahi ay sababi karto torsion caloosha ah (waa inaanan illoobin in xayawaanku "loogu talagalay" inay wax la cunaan madaxooda dhulka).
Sida loo doorto baaquli
Hadda oo aan aragnay noocyada kala duwan ee baaquli, waxaan diirada saari doonaa waxa aan dooran karno si aan ugu haboonaano baahiyaha eeygeena iyo inuu si fiican u cuno si fudud.
Annagu ma sii kordhin doonno, marka la soo gaabiyo, dooro baaquli caag ah haddii aad rabto wax jaban, dhoobada eeyaha qaba xasaasiyad ama biraha haddii aad rabto wax aad u adkaysi leh. Bixiyeyaasha otomaatiga ah ayaa waxtar leh haddii aadan rabin inaad ka warqabto quudinta eygaaga ama aadan guriga joogin wax badan. Ka digtoonow weelasha la kiciyey, taas oo sababi karta torsion -ka caloosha.
Waxaan hore u sheegnay, eyda (iyo xayawaanka kale) waa caadaysteen oo dabci ahaan loogu talagalay inay cunaan iyagoo madaxa dhulka ku haya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xaalad aad ku dooran karto baaquli sare haddii eeygaagu leeyahay qoorta, misigta ama dhibaatooyinka dhabarka. Hase yeeshee, waa khasab inaad marka hore la hadasho dhakhtarkaaga.
Ugu dambeyntii, kartida ayaa sidoo kale ah wax lagu xisaabtamo. Sida iska cad, haddii eeygaagu yar yahay quudiyaha yar wuu shaqayn doonaa, halka haddii uu ka weyn yahay waxaad u baahan doontaa wax leh awood aad u badan. Naftaada ku hanuuni xaddiga cuntada aad u baahan tahay inaad siiso mar kasta si loo go'aamiyo awoodda.
Meesha laga gato quudiyaha eeyga
Runtii waxaad ka heli kartaa quudiyaha eeyga ficil ahaan meel kastaInkasta oo haddii aad u baahan tahay wax ka sii gaar ah, ma aha goob kaliya ayaa kuu shaqayn doonta. Tusaale ahaan:
Amazon Waa meesha aad ka heli doonto noocyada ugu badan ee quudiyaasha eeyaha, marka lagu daro, waxaa jira nooc kasta oo loo habeeyay baahida adiga iyo eeygaaga labadaba.
Halka ay ku jirto dukaamada internetka xoolaha sida TiendaAnimal ama Kiwoko ma heli doontid noocyo badan. Si kastaba ha ahaatee, waxay haystaan ​​ikhtiyaarro aad u xiiso badan, gaar ahaan shabakadda, in kastoo haddii eeygaagu leeyahay baahiyo gaar ah waxaa ugu wanaagsan inaad la tashato dukaanka jirka.
Ugu dambeyntii, dhammaan dusha sare ee leh qayb loogu talagalay xayawaanka guriga (sida Carrefour, Leroy Merlin…) waxaad yeelan doontaa baaquli eeyaha. Si kastaba ha ahaatee, kuma kala soocaan iyagoo leh moodooyin badan, inkasta oo ay degdeg kaaga saari karaan.
Quudiyaha eeygu wuxuu leeyahay jajab ka badan inta ay u muuqato, maadaama haddii aan rabno inaan si fiican u quudinno eyga waa inaan tixgelinaa wuxuu u baahan yahay. Noo sheeg, waa quudiyaha uu eeygaagu isticmaalo? Ma ku talinaysaa wax gaar ah? Ma kula tahay inaan ka tagnay wax aan ku xisaabtamno?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Qalabka eyga » Eeyaha quudiya: wax walba waan kuu sheegaynaa